Love Story (6 & 7) | ကိုသင္ကာ . . . . Ko Thinker
← New Media, Linitation of Information Technology and Domestic Media
Love Story (8 & 9) →
Love Story (6 & 7)
အချစ်စစ်တစ်ခု၏ ဘာသာဗေဒ (၆၊ ၇)
ပထမနှစ်ပြီးဖို့ လပိုင်းပဲ လိုတော့သည်။ ကျနော်စာကို လုပ်ပါသည်။ ကျနော် စာလုပ်လျှင် သူငယ်ချင်းများကိုလည်း အညီအမျှကူပါသည်။ ယဉ့်ကိုလည်း ကျနော် စေတနာမပျက်ခဲ့ပါ။ အဆိုင်းမန့်တွေ ကူရေးပါဆိုတုန်းကလည်း ကျနော် ကူရေးပေးပါသည်။ ကျနော် ယဉ့်ကို လိုက်မပို့ဖြစ်တော့ပါ။ သူ့အိမ်မှာ တစ်ခုခုလုပ်စားမယ်ဆိုရင်လည်း သူငယ်ချင်းတွေ စုံမှ သွားပါသည်။
အချစ်ကြောင့် အရက်သောက်သလားဟု မေးစရာ ရှိမည်ထင်ပါသည်။ တကယ်တွင် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ထိုသို့ဖြစ်အောင် အချစ်က မောင်းဖြုတ်ပေးလိုက်သည် ဆိုလျှင်မူ မှန်နိုင်ပါသည်။
ကျနော့် ကလေးဘဝသည် အရာရာ သာယာခဲ့ပါသည်။ ၈၈ အရေးအခင်းမတိုင်မီတွင် မိသားစု စီးပွားရေး ပျက်စီးလာသည်မှ စ၍ ကျနော် ၁၀ တန်းအရောက်တွင် အိမ်ထောင်ပြိုကွဲသည်အထိ ဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ အားကိုးစရာ ဆွေမျိုးဆို၍လည်း လောက်လောက်လားမရှိသော ကျနော်သည် ထိုဒဏ်ချက်တို့ဖြင့် ပြည့်နှက် နာကျင်နေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၁၀ တန်းဖြေပြီးသည်မှစ၍ ယနေ့အထိ ကျနော်သည် တစ်ယောက်တည်း ဖြတ်သန်းခဲ့ပါသည်။ ကျနော့်နားကို အဖော်အဖြစ်ရောက်လာသည့် မိန်းကလေးများသည်လည်း ကြာမြင့်စွာ ကျနော့်ကို စိတ်မရှည်နိုင်ခဲ့ကြပါ။
ထိုအချိန်တွင် ကျန်သော ဘဝအတွက် စိတ်ကူးယဉ်ထားခဲ့သမျှကိုလည်း ယဉ်က ဖြိုချလိုက်ပါသည်။ ကျနော်သည် လူဆိုးလူမိုက် ထောင်ကျတန်းကျလောက်တော့ ဘဝပျက်မသွားပါ။ သို့သော် အလုပ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်၊ ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းရင်း အရက်သောက်တတ်သူတော့ ဖြစ်သွားပါသည်။
ကျနော်တို့၏ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ပြီးခါနီးကာလသည် ငြီးငွေ့မှုမရှိသည့်တိုင် ကိုယ်စီ ဖုံးကွယ်ထားသော ခံစားချက်ကလေးများတော့ ရှိပါသည်။ ကျနော်သည် ယဉ့်အပေါ် လိုတာထက် ပိုအလို မလိုက်မိအောင်နေပါသည်။ သူဝမ်းနည်းဟန်ပြသော်လည်း ကျနော် တင်းမာနိုင်ပါသည်။
မိန်းကလေးသူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ကို ကျနော်တို့ ယောက်ျားလေး ၃ ယောက်က အစစ အရာရာ ညှာပါသည်။ လွယ်အိတ်လွယ်ပေးသည်။ စာအုပ် သယ်ပေးသည်။ ထမင်းချိုင့် ဆွဲပေးသည်။ သူတို့ကလည်း ထမင်းထည့်လာပေးသည်။ ထိုသို့ နေလာရင်း ရယ်စရာလေး နှစ်ခုကိုတော့ သတိရနေကြပါသည်။
ကျနော်တို့သည် ကျောင်းမှလစ်၍ ကမ္ဘာအေးဘုရားသွားကြသည်။ တနေ့တွင် ကျနော်က ထမင်းချိုင့်ဆွဲရန် အလှည့်ကျပါသည်။ အုံကြီးက ချိုင့်အကြီးကြီးနှင့် အပြည့်အသိပ်ထည့်လာသည်။ ကားပေါ်တလျှောက် လက်တစ်ဖက်သာ အားသော ကျနော်တွင် ထမင်းချိုင့်ကိုင်ထားသော လက်က မသိသာ ရမ်းနေသဖြင့် ချိုင့်လက်ကိုင်က လက်ဖဝါးကို ပွတ်တိုက်နေသလို ဖြစ်နေပါသည်။ အုံကြီးတို့ ထိုင်စရာ ရကြသော်လည်း ဟင်းဖိတ်မည်စိုး၍ ပေးမကိုင်ပါ။
ဘုရားပေါ်ရောက်၍ သစ်ပင်ရိပ်တွင် ထိုင်မိသောအခါ ထမင်းချိုင့်ကို ဆုပ်ထားသော ကျနော့် လက်ဖဝါးမှာ နီရဲနေပါသည်။ တချိန်လုံး စုတ်တံကိုင်နေသော ကျနော်လက်သည် ဘဝကြမ်းသလောက် လက်ဖဝါးက မကြမ်းခဲ့ပါ။ အုံကြီးက လက်ဖဝါးရဲနေတာကို မြင်ဖြစ်အောင်မြင်သည်။
‘တဝေ ပြစမ်း နင့်လက်”
ကျနော်က ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီး နုသလား ပြောမည်စိုး၍ ရှက်သဖြင့် လက်နောက်ပစ်ထားသည်။ အုံကြီးက အလျှော့မပေး အတင်းဆွဲယူကြည့်သည်။
“သွေးခြေဥတယ်တဲ့တော့” ဟူသော သူ့အသံဗြဲကြောင့် ပိုင်ပိုင်နှင့် ယဉ်တို့ကပါ လာကြည့်သည်။ ယဉ်သည် ခွက်ထိုး ခွက်လန် ရယ်လေသည်။
ပိုင်ပိုင်က “မှန်းစမ်း ငါကြည့်မယ်”ဟု လက်ဖဝါးကို ကိုင်ကြည့်သည်။ ပိုင်ပိုင်က ရယ်ရင်းပြောသည်။
“ဟဲ့ ယဉ်ထွေး၊ လာကြည့်စမ်း တဝေ့လက်က ငါတို့လက်ထက် နုတယ်တော့”
ကျနော်က ရှက်သဖြင့် လက်ကို ပြန်ရုတ်သည်။ အုံကြီးက အတင်း ဆွဲထားသည်။
“ဒီကောင် နုပြီးရင် နူတော့မှာ” ဟု မိုးကြီးက ဟာသလုပ်သည်။
“ရာဇဝင်တော့ ရိုင်းပါပြီဟယ်၊ တဝေတို့ ထမင်းချိုင့်ကိုင်လို့ လက်သွေးခြေ ဥသတဲ့”
ဟု အုံကြီးက ညဉ်းတွားလေသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ကျနော်သည် လွယ်အိတ်လွယ်ပေးရသည့် ဂျူတီသာ ကျတော့သည့်အပြင် “တဝေတို့ ထမင်းချိုင့်ကိုင်တာ လက်သွေးခြေဥတယ်တဲ့တော့”ဟု မှတ်မှတ်ရရ အုံကြီးက ယနေ့အထိ ပြောဆဲ ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ဟာသမျိုး ယဉ်လည်း ဖြစ်ဖူးသည်။
ဘုရားသွားလျှင် ကျနော်တို့က လွယ်အိတ်လွယ်သူလွယ်၊ ထမင်းချိုင့်ဆွဲသူ ဆွဲသလို ဖိနပ်တွေကို အိတ်နဲ့စုထည့်ပြီး ယဉ်က ကိုင်သည်။ အုံကြီးနှင့် ပိုင်ပိုင်တို့က အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်၍ အငယ်ဆုံး ယဉ်က ဖိနပ်အိတ် ကိုင်သည်။
ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်လမ်းလျှောက်ရင်း ဟိုဒီ လူစုက ခပ်လှမ်းလှမ်းဖြစ်နေကြသည်။ ယဉ်ပျောက်နေ၍ လိုက်ရှာသောအခါ ရင်ပြင်လယ်တွင် မျက်နှာနီနီနှင့် ရပ်နေသော ယဉ့်ကိုတွေ့ကြရသည်။ အောက်မှ ဖိနပ်တွေ ပုံနေသည်။
ယဉ့်အဖြစ်ကို ကြားရသောအခါ ကျနော်တို့ ရယ်ကြလေသည်။ ယဉ်သည် ကျနော်တို့နောက်ကို လိုက်လာရင်း ၆ ရံမျှထည့်ထားသော ဖိနပ်ထည့်သည့် ကြွပ်ကြွပ်အိတ်က ဗျန်းကနဲ ကွဲကျလေသည်။ အိတ်ထဲလည်း ပြန်ထည့်မရ၊ လက်က ၆ ရံစလုံး ကိုင်လို့လည်း မဖြစ်နှင့် ယဉ်သည် ရှက်ရှက်နှင့် ဖိနပ်ပုံဘေးတွင် ကျနော်တို့ သူ့ကို ပြန်ရှာတွေ့တဲ့အထိ ရပ်နေခဲ့ရလေသည်။
ယဉ်သည် အလှအပကို မက်သည်။ သူတို့ညီအစ်မများတွင် ယဉ်သည် အလှဆုံးဖြစ်သည်။ အရပ်မြင့်သည်။ အသားဖြူသည်။ နူတ်ခမ်းပါးသည်။ သူ့မျက်လုံးများသည် ရီဝေဝေရှိသည်။ မျက်တောင်များ ကော့ပျံနေသည်။ ကလေးတစ်ယောက်လို အားရပါးရ ရယ်တတ်တာ သူ့စတိုင်လ်ဖြစ်သည်။
“ဟဲ့ ငါငယ်ငယ်ကလေ မီးသွေးခဲတွေနဲ့ ငါ့အစ်မတွေလုပ်သလိုမျိုး မျက်လုံးတွေ မျက်ခုံးတွေ ဆွဲတာပေါ့ဟယ်။ ငါ့အမေက မျက်လုံးတွေ ကန်းကုန်တော့မှာပဲဆိုပြီး ရိုက်တယ်တော့။ အိမ်ဘေးက အဒေါ်ကြီးတွေက ပြောတယ်တဲ့၊ နင့်သမီး ၁၆ နှစ်တောင် နေမှာ မဟုတ်ဘူး၊ လင်ရမှာ၊ ဒီလောက်လှချင်နေတာ လို့ပြောတယ်” ဟု ပြန်ပြောပြတတ်သည်။
အလှပြင်ပစ္စည်းဆိုရင်လည်း စျေးကြီးပေ့ဆိုတာမျိုးကို ဝယ်သည်။ “နင့်လခနဲ့ လောက်ပါ့မလားဟ”ဆိုတော့ ငါ့လခက ငါမုန့်စားတာနဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်း၊ အဝတ်အစားနဲ့ကုန်တယ်။ ကျောင်းလခတွေ ကျန်တဲ့စရိတ်တွေ ငါ့အစ်မတွေဆီက တောင်းတယ်ဟု ဆိုသည်။
သူ့အစ်မ မသင်းသည် ဒဂုံတက္ကသိုလ်တွင် ကျနော်တို့ထက် စောသည်။
“နင်တို့ ရှိလို့ပဲ တဝေရေ၊ မဟုတ်ရင် ငါ့မှာ သူ့ကို အတန်းချိန်မတူဘဲ စောင့်ပြန်ရတာ တဒုက္ခ”ဟု ပြောတတ်သည်။
မသင်းက အလွန်အေးသည်။ ဆံပင်တိုတို ပြုံးချိုချိုမျက်နှာလေးနှင့် ဖြစ်သည်။ “မသင်းက နင့်ထက် နုတယ် ယဉ်ရဲ့”ဟု ကျနော်တို့က စကြသည်။ မသင်းသည် ကျန်းမာရေး ချူချာသည်။ အဆုတ်ရောဂါ ရှိသည်။ ခေါင်းလျှော်တိုင်း နေမကောင်းဖြစ်တတ်၍ ဆံပင်အရှည်ကြီးကို ညှပ်လိုက်ရရာ အခုလို တိုသွားသည်ဟု ဆိုသည်။
ကျနော်တို့ လာလည်တိုင်း မသင်းက မငြီးမငြူ ထမင်းချက်ကျွေးသည်။ ယဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မသင်းကို ခင်မိ၍ စိတ်မကောင်းကြုံရသည်ကို နောက်ပိုင်းတွင် ရေးပါမည်။
ယဉ် အလှအပ သိပ်မက်တာကို ကျနော် မကြိုက်သော်လည်း ဘာမှတော့ မပြောပါ။ “တဝေ မင်း သူ့ကို ယူရင်တော့ သူ့အလှပြင်ပစ္စည်းဖိုးနဲ့ မင်းမွဲမှာ”ဟု မိုးကြီးက စတတ်သည်။
ထိုသို့အလှအပ မက်မောလွန်းခြင်းသည်လည်း ယဉ့်အတွက် ချစ်သူရွေးရာတွင် ငွေကြေးနောက်ခံကို ထည့်တွက်နေရတာလားဟု နောင်သောအခါ ကျနော်တွေးမိသည်။
သူက ရုပ်ဝတ္ထုဆန်သည်။ ကျနော်က အချစ်တွင် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သည်။ ကျနော်ချစ်နေတာက ချစ်နေရရင်ကို အဓိပ္ပာယ်ရှိနေသည် ထင်သည်။
“ငါအိမ်ထောင်ကျရင်တော့ဟယ် …”လို့ အစချီပြီး သူပြောသည့် ဂုဏ်ပကာသနတွေကို ကျနော် လန့်တတ်သည်။
မင်္ဂလာဆောင် တစ်ခုခုသွားပြီးတိုင် “ငါကျရင် ဘယ်လိုဆောင်မှာ…”ဟု သူပြောသောအခါ လူမွဲပန်းချီဆရာ ကျနော်မှာ သိမ်ငယ်ရပြန်သည်။
အခု သူဆေးတပ်က လူကို ရွေးတယ်ဆိုတာ သူလိုချင်တာကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့ နေမှာပေါ့ဟု ကျနော် ဖြေသိမ့်နာကျင်တွေး တွေးပါသည်။ သို့သော် ယဉ့်အပေါ်တွင် ကံကြမ္မာက ကောင်းသည်လား ဆိုးသည်လား မသိ၊ ကျရောက်လာပါသည်။ ထိုစဉ်ကတော့ ဆိုးဝါးသော ကံကြမ္မာဟု ကျနော်တို့ သူ့အတွက် စိတ်ပူခဲ့ရသည်။
6 responses to “Love Story (6 & 7)”
ဒါေပမဲ့ တျဖည္းျဖည္း လူနဲ႔မတူေတာ့တဲ့ (ႏွလုံးသား ရင့္က်က္သြားတဲ့) ဇာတ္ေကာင္မ်ိဳးကုိ ပုိသေဘာက်သဗ်။
အစ္ကို စာေရးတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေကာင္းတယ္ဆိုတာလဲ သတိထားမိတယ္။ ျမန္ျမန္ေလး ဆက္ေရးေပးပါလား
It is really good to read your block indeed. I have been reading all things related to academic field. I have not read something like this foralong time. when i read it i read like hungry pig. But one things that i found out here is this place………
မဂၤလာေဆာင္ တစ္ခုခုသြားၿပီးတိုင္ “ငါက်ရင္ ဘယ္လိုေဆာင္မွာ…”ဟု သူေျပာေသာအခါ လူမြဲပန္းခ်ီဆရာ က်ေနာ္မွာ သိမ္ငယ္ရျပန္သည္။
အခု သူေဆးတပ္က လူကို ေရြးတယ္ဆိုတာ သူလိုခ်င္တာကို ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္လို႔ ေနမွာေပါ့ဟု က်ေနာ္ ေျဖသိမ့္နာက်င္ေတြး ေတြးပါသည္။
Between these two facts there is huge gap. it will be more clear foraread if you can give more information between အခု and the past time when you were listening hers idea about her prospective husband.
But it does not important and does not spoil the whole work. Still I can see your mastering ability in retellingastory.